Momba ny gitara niatrika horonantsary
Ny akora ampiasaina amin'ny horonantsary miorina amin'ny haino aman-jery avo dia birch misy habe 700KG / M3. Satria sarotra ny fitaovana birch, ny plywood miatrika horonantsary vita amin'ny birch dia fisaka ary manana fahaiza-mitondra mavesatra. Tsy hisy ny hiondrika amin'ny tsindry mafy. Ankoatr'izay, ny surf ...
Inona no atao hoe plywood
Ny tabilao dia karazan-kazo vita amin'ny olombelona namboarina indray amin'ny alàlan'ny fametahana hoditra. Ny plywood dia atao amin'ny alàlan'ny fanapahana volo lehibe amin'ny alàlan'ny peratra isan-taona. Aorian'ny fanamainana sy fifamatorana, dia novokarina araka ny fenitry ny fambolena voa maôganika mitsivalana amin'ny veneer mifanila aminy. Ny moana ...
Kitapo an-dranomasina - plywood tsy misy rano
Ny trondro an-dranomasina ROCPLEX dia iray amin'ireo fitaovana hazo fampiasa matetika amin'ny fanamboarana fanaka sy haingon-trano tsy misy rano sy hamandoana. Izy io dia afaka manatsara ny tahan'ny fampiasana hazo ary io no fomba lehibe indrindra hitsitsiana hazo. ROCPLEX dranomasina azo ampiharina amin'ny yachts, Shipbuilding indostria m ...